बियर लोकप्रिय शीतल पेय को छ। विशिष्ट गंध तुरुन्तै उत्पादन केही sips मादक पदार्थ सेवन गरेको छ जो एक व्यक्ति issuing रूपमा तथापि, यो एक धेरै महत्वपूर्ण drawback छ। त्यसैले, धेरै चालक बियर बोतल मा कसरी पीपीएम संग चिन्तित हुनुहुन्छ। यो प्रश्नको जवाफ, तपाईं आजको लेख पढेर सिक्न हुनेछ।
बियर को एक बोतल मा पीपीएम कति थाहा नगर्ने ती ठ्याक्कै यो एकाइ अक्सर प्रयोग गरिन्छ के अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास मा सोच गरिनेछ। यो रक्सीको एकाग्रता देखाउँछ। प्रति हावा मा यसको सामग्री परिभाषित को लीटर मिलीग्राम विपरीत, यो तपाईं शरीर मा रक्सी को राशि सेट गर्न अनुमति दिन्छ। अभ्यास यी दुई फरक मापदण्डहरू वास्तवमा एकदम निकट प्रत्येक अन्य सम्बन्धित भनेर देखाइएको छ। यसको मतलब एक भेट्टाएको मानव रगत, मा पीपीएम रक्सी वर्तमान 0.45 मिलीग्राम / रक्सी को एल छ।
संसारको राज्य चालक केही इलाका मा मादक पेय को खपत उदारवाद अनुमति छन्। बियर को एक बोतल मा पीपीएम कति थाहा नगर्ने ती, तपाईं रक्सी को एक सानो एकाग्रता धेरै खाद्य पदार्थ मा निहित कि सम्झना गर्न आवश्यक छ। त्यसैले, पनि एक उत्सुक teetotaler हास्यास्पद परिस्थिति प्रतिरक्षा छैन। यस्तो प्रभाव अक्सर जामुन, फल, कार्रोप्नेटेड पेय, kvass वा किण्वित दही खाने पछि हुन्छ।
यो अर्थमा कुनै कम खतरनाक केही औषधीको लिइरहेको छ। उदाहरणका लागि, पनि एक साधारण valerian Corvalolum वा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन सक्छ alkotestere लागि परीक्षण गरे। विशेष गरी यस्तो अवस्थामा लागि चालक नशा, रक्सी, नशीले पदार्थों, psychotropic लागूपदार्थको र विष विज्ञान सहित नेतृत्व कुनै पनि पदार्थ प्रयोग गर्न कुनै अधिकार छ जो अन्तर्गत कानून द्वारा अनुमोदित भएको थियो। यदि सास चालक 0.16 मिलीग्राम / एल अधिक इथाइल रक्सीको एकाग्रता पाइने व्यवस्था उल्लङ्घन लागि जिम्मेवारी मात्र ती परिस्थितिमा हुन्छ
को चालक प्रतिक्रिया मा रक्सी को प्रभाव
तपाईं जवाफ अघि, बियर मा धेरै पीपीएम बोतल कसरी 0.5, तपाईं रक्सी मानव व्यवहार को खुराक कसरी परिवर्तन बुझ्न आवश्यक छ। धेरै कम एकाग्रता मा चालक धारणा गाह्रो सार्ने प्रकाश स्रोतहरु। उदाहरणका लागि, पनि 0.2-0.5 पीपीएम मा गाह्रो आगमन वाहन गर्न दूरी निर्धारण छ। उहाँले सुरक्षित दूरी कायम गर्न रोक्छ।
0.5-0.8 पीपीएम को शरीर मा उपस्थित जो चालक, छैन सही दूरी अनुमान गर्न सक्षम छ र बस परिक्रमा मा फिट गर्न सक्दैनन्। आफ्नो आँखा एकदम बिस्तारै नजिकै प्रकाश र टाढा रोशनी प्रयोग प्राप्त, त्यसैले अन्धो जोखिम नाटकीय बढ्दै छ। motorcyclists र cyclists लागि जाँदा, तिनीहरूले एक स्थिर संतुलन राख्ने आफ्नो क्षमता गुमाउन।
बाट 0.8 मा 1.2 पीपीएम को शरीर मा पत्ता छ जो चालक, यूफोरिया एक राज्य छ। उहाँले लगभग पर्याप्त आफ्नै सक्षमता आकलन गर्न आफ्नो क्षमता हराउछ। उहाँले प्रतिक्रिया को गिरावट र दृश्य को कोण को एक तेज साँघुरो अवलोकन, त्यसैले यो कार छेउमा चढेर छैन देख्न सकिन्छ।
एक व्यक्ति जसको रगत 1.2-2.4 पीपीएम देखाए, कडाई कार चलाउनु गर्न निषेध गरिएको छ। उहाँले स्वास्थ्य र कहिलेकाहीं जीवन खर्च सक्ने मूर्ख गल्ती जोगिन गर्न थाल्छ। उदाहरणका लागि, यस्तो अवस्था भएका व्यक्ति, अक्सर ब्रेक पेडल र ग्याँस भ्रमित।
कति पीपीएम बियर र अन्य पेय पदार्थ को एक बोतल मा?
अभ्यास धेरै वर्ष विभिन्न परिस्थिति आधारमा, रक्सी को ब्रान्डहरु को प्रयोग, विभिन्न परिणाम दिन भनेर देखाउँछ। सिद्धान्त मा, बियर को आधा बोतल 0.16 पीपीएम समावेश गर्दछ। तर तपाईं बियर को एक सानो गिलास पिउन र अघि पाङ्ग्रा पछि बस्न, तपाईं उदाहरण को भन्दा सजिलो प्रकाश ग्रेड मानिन्छ कि खातामा लिनुपर्छ। त्यसैले, बियर devyatigradusnoy एक मानिस पिएको बोतल उहाँले वोदका प्रयोग थियो आशङ्का गर्न सकिन्छ।
रक्सी को मामला मा, यो धेरै सजिलो छ। यहाँ, धेरै पक्षहरूमा मा पीपीएम को नम्बर पेय को बल मा निर्भर गर्दछ। त्यसैले, सात सय milliliters dvenadtsatigradusnogo रक्सी रक्सी को 12 ग्राम समावेश गर्दछ।
गैर-रक्सी पिउने बियर र ड्राइभिङ
अब पनि सामान्य दही मा छ प्रतिशत रक्सी गर्न उपस्थित हुन सक्छ। धेरै आधुनिक प्रजातिहरू मा समावेश कुनै 0.5 भन्दा बढी% बियर बोतल नरम प्रतिक्रिया मा कति पीपीएम आश्चर्य गर्नेहरूलाई। त्यसैले, यो पेय व्हील मा खपत गर्न सकिन्छ। तर, यो अत्यंत ध्यान संग गर्नुपर्छ।
हालैको एउटा प्रयोग अनपेक्षित परिणाम देखाए। दुई घण्टा गैर-रक्सी पिउने बियर खपत गर्ने दस स्वयंसेवकहरु को निर्वाचकगण समूहको लागि। र एक व्यक्ति बियर को दुई लिटर को हिसाब। अध्ययन पछि सहभागीहरू एक ट्यूब मा सास फेर्न आग्रह गरेका थिए। को breathalyzer को फलस्वरूप उहाँले आठ स्वयंसेवकहरु को रगत मा निहित छ कि 0.11% रक्सी रेकर्ड भयो।
के रक्सीको weathering असर?
बियर बोतल 0.5 मा धेरै पीपीएम, तपाईं शरीर बाट हटाउन को समय ध्यान गर्न आवश्यक छ कसरी बाहिर आंकडा। सबै को पहिलो, धेरै सुकाउने समय रक्सीको ठूलो र एक व्यक्ति जीव को व्यक्तिगत विशेषताहरु मा निर्भर गर्दछ। यसलाई वजन मा वृद्धि संग फेला र रक्सी प्रक्रिया छ जो मा दर बढ्ने थियो।
महत्वपूर्ण भूमिका कलेजो को राज्य द्वारा प्ले। सामान्यतया कार्य शरीर रक्सीको विघटन समयमा गठन विषाक्त यौगिकों को तीव्र हटाउने योगदान पुग्छ।
पहिले नै कति बियर बोतल मा पीपीएम चिन्नेहरू लागि, यो यस्तो वर्ष को समय, प्रयोग, लिङ्ग, सामान्य स्वास्थ्य, बल र पेय को संरचना को आवृत्ति रूपमा कारक त्यस weathering यसको दर निर्भर, रोचक हुनेछ। उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार, औसत मानव शरीर छ गर्न आठ घण्टा आवश्यक हुनेछ।
व्यवस्थामा लागि प्रदान पेनाल्टी
ड्राइभर, जसको रगत रक्सी प्रकट भएको थियो, आसन्न सजाय खतरनाक। यसले बियर, रक्सी वा वोदका को एक बोतल मा पीपीएम संख्या थाह कि बिना हामी प्रत्येक कि सम्झना छ। चालक प्राथमिक रक्सीको पत्ता लगाउने को मामला मा बारेमा तीस हजार को राम्रो भुक्तानी गर्न हुनेछ। साथै, यो आधा वा दुई वर्ष कुनै पनि मोटर वाहन चलाउनु अवैध छ।
पटक-पटक उल्लंघन मा राम्रो रकम पचास हजार सम्म बढ्छ। अधिकार सन्दर्भमा तिनीहरूले पहिले नै तीन वर्ष भन्दा बढी लिएका छन्। तपाईंले पहिले मत गर्दा पाङ्ग्रा पछि समातिए तीन पटक, दोकान छ भने, यो दस पन्ध्र दिन को कैद एक शब्द लागि सजा चाहनुहुन्छ।
क्याबरन Sauvignon - उम्दा रक्सी
अड्डा लागि बरफ माछा मार्ने लागि Balancer: आफ्नै हात को उत्पादन। जाडो माछा मार्ने लागि घर balancers
संघाई: जनसंख्या। संघाई संख्या र जनसंख्या को घनत्व
महिला मा महिनावारी अघि खैरो छुट्टी